ब्रह्माण्डमा ताराको संख्या कति छ ?
हामी रातमा आकाशमा धेरै तारा देख्छौँ, हाम्रो मनमा सधैँ एउटा जिज्ञासा उठिरहन्छ । त्यो हो, आखिर ब्रह्माण्डमा कति तारा होलान् त ?
वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीमा जति समुद्री तट छन् । त्यसमा जति बालुवाका कण छन्, त्यति नै संख्यामा ब्रम्हाण्डमा तारा रहेको दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी खगोलविद् कार्ल सगनले एक टेलिभिजन सोमा यस्तो दाबी गरेका हुन् । तर, उनको दाबी सही हो त ? के ब्रम्हाण्डमा रहेका ताराको गणना सम्भव छ त ?
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका खगोलविद् प्रोफेसर गैरी गिरमोर हमारीले आकाशगंगामा रहेका ताराहरूको गणना गरिरहेका छन् । आकाश गंगामा पृथ्वीलगायत सबै ग्रह अर्थात् सौर्यमण्डल रहेको छ । प्रोफसर गैरीले सो प्रोजेक्टको अगुवाइ गरिरहेका छन् । उनको टिमले युरोपेली अन्तरिक्षयानका माध्यमबाट आकाशगंगामा रहेको ताराको गणना गरिहेको छ ।
प्रोफेसर गिरीले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘दूरीका हिसाबले हाम्रो टोलीले पहिल्यै तथ्यांक जारी गरेको छ । जसमा ताराको संख्या करिब २ अर्ब रहेको छ । तर, यो संख्या आकाशगंगामा रहेका कुल ताराहरूको एक प्रतिशत मात्र हो ।’
आकाशगंगामा करिब २० हजार करोड तारा हुन सक्छन् । तर, यो एउटा आकाशगंगाको मात्र तथ्यांक हो ।
हर्बल सिद्धान्तअनुसार आकाशगंगाको चमक तथा पृथ्वीसम्मको दूरीबारे पत्ता लगाउने कोसिस भइरहेको गैरी बताउँछन् । ब्रह्माण्डमा १० हजार करोड आकाशगंगा रहेका छन् र प्रत्येक आकाशगंगामा करिब २० हजार करोड तारा छन् ।
अब यी संख्याहरूको योग गणना गर्ने हो भने ब्रह्माण्डमा रहेका ताराको संख्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । अर्थात्, २ सय अर्ब खर्ब हुनेछ ।
बालुवाको कण कति ?